bhim rawal | Ratopati
भीम रावलको प्रश्न : सूर्य चिह्न बिक्री भएको हो ? access_timeबैशाख १, २०७९
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सूर्य चिह्न बिक्री हुने व्यवसायिक चिह्न हो भन्दै नेतृत्वसमक्ष प्रश्न गरेका छन् । एमालेले बुधबार राप्रपा नेपाल र परिवार दललाई सूर्य चिह्नमा चुनाव लड्न दिने तर निर्वाचित व्यक्ति पुरानै हैसियतमा रहनेगरी सहमति गरेकोमा रावलले आपत्ति जनाएका हुन् ।&...
म परीक्षण हुन चाहान्छु : भीम रावल access_timeमंसिर १३, २०७८
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले आफु निर्वाचन मै जाने अडान दोहोर्याएका छन् । सौराहामा आयोजित दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा बोल्दै रावलले आफु परीक्षण हुन चाहेको बताए । उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सार्वभौम हुने बताउँदै उनीहरुले नेतृत्व चुन्न पाउनुपर्नेमा जोड द...
महाधिवेशनमा आपत्तिजनक दृश्य देखियो : भीम रावल access_timeमंसिर १२, २०७८
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा आपत्तिजनक एवं खतरनाक दृश्य देखिएको बताएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई बेबारिस बनाएर बन्दसत्रलाई तुहाएको रावलको आरोप छ । ‘एक–दुई दिनका घटनाबाट मलाई त के...
बालुवाटारबाट भीम रावललाई धम्की, सञ्चारमन्त्री भन्छन्, ‘सुरक्षामा खतरा छैन’ (भिडियो सहित) access_timeमाघ २, २०७६
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलको सुरक्षामा कुनै प्रकारको खतरा नरहेको दावी गरेका छन् । बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले रावल नेकपाकै नेता रहेको र सरकार पनि नेकपाकै रहेको भन्दै ब...